Sarkaal ka tirsanaa Ilaalada Madaxtooyada oo ku geeriyooday howlgalkii – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Sarkaal ka tirsanaa Ilaalada Madaxtooyada oo ku geeriyooday howlgalkii
Allhadaaftimo December 11, 2019 December 11, 2019 Uncategorized
Maxamuud Ismaaciil Warsame (Muuf) oo ahaa Sarkaal ka tirsanaa Ururka 60aad Ilaalada Madaxtooyada ee Ciidamada Xoogga dalka ayaa ku geeriyooday weerarkii xalay Ciidamada Ammaanka soo afjareen ee Hotelka SYL.
Sarkaalkan ayaa ka mid ahaa saraakiishii u horeeysay ee ka tirsanaa Ilaalada Madaxtooyada ee u gurmaday Hotelka SYL, kaddib markii ay gudaha hotelka soo galeen rag hubeysan oo ka tirsanaa Al-Shabaab.
Maxamuud Ismaaciil ayaa ka qeyb qaadanayay howlgalkii lagu badbaadinayay dadkii ku jiray Hotelka SYL, illaa markii dambe oo naftiisa huray.
Taliye kuxigeenkii hore Nabadsugida C/salaan Guuleed ayaa sheegay in Maxamuud Ismaaciil uu si dhow u garanayay, sanadkii 2009-kii uu bartay, xilligaasoo uu ka mid ahaa Ilaalada Ra’iisul Wasaarihii hore Cumar C/rashiid.
Waxaa uu sheegay inuu ahaa Sarkaal caan ahaa oo si dhow ula soo shaqeeyay Ra’iisul Wasaarayaashii hore ee soo maray.
Muuqaal sanadkii hore 2018 la soo geliyay barta Youtube ayuu Maxamuud Ismaaciil kaga soo muuqday, xilli Ra’iisul Wasaare Kheyre booqanayay magaalada Baydhabo, waxaa uu ka sheekeynayay inuu ka mid ahaa ciidamadii u horeeyay ee Baydhabo ka howlagalayay ee lagu aas aasay Ciidanka xoogga dalka, xilligii dowladdii Madaxweyne C/llaahi Yuusuf, isla markaana dowladnimada ka soo bilaabatay Baydhabo.
Previous Golahii Guurtidu Waxa Uu Isku Bedelay Gole Agoomeedo Oo Agoontu Bilka Kala Soo Baaxdo”Siyaasi Dhoola Yare
Next Mahad Salaad “Laamaha amniga waxaa la amray in ay qariyaan qasaaraha